Taorian’ny fety, nahazo vahana tanteraka ny mpanao halabotry mpanao latsak’alina. Manomboka eo amin’ny 11 ora sy sasany ka hatramin’ny 3 ora maraina no fandehanan’izy ireo. Zary lasa miambina amin’ny alina ireo mponina, mampiasa famohamandry mihitsy aza. Trano roa no efa voapitsok’ireo tsy mataho-tody fa naheno ny kivindro nivovo ireo manodidina ka nandrehitra jiro. Lasa nandositra avy hatrany moa ireo tsy valahara. Voalaza fa misy vavahady ihany amin’ireo lalankely fa mananika tamboho na vavahady ireo tontakely.
Toeram-ponenan’ny mpanendaka ho any Andravoahangy ihany koa eo Behoririka ambany tetezana. Mahatalanjona ny mponina eny an-toerana ny fahitana ireo tovolahy maro amin’ireo toeram-pisakafoanana izay mampandroso olona hisakafo amin’ny fiantsonan’ny taksibe eo amin’ny Solomaso sy amin’ireo “Look’s” ary ireo ampitany kanefa dia misy manendaka tsy lavitra ireo toeram-pisakafoanana alina ireo koa.
Ireo mpivarotra sy mpaka entana amin’ny tsenan’ny tantsaka maraina koa moa dia efa maro no tratra izay andrasan’ireo tsy mataho-tody kendritohina eo amin’ny lalana manodidina ny tsena sy Mascar ary ireo amoron-drano hihazo an’Ambodivona. Tsy vitsy ireo efa tratran’ny polisin’Antaninandro noho ny ezak’ireto farany fa miseholany ihany koa ireo jiolahy amin’iny faritra Andravoahangy sy ny manodidina iny.